Hiran State - News: HS:-M/weynaha iyo xisbigii oo ku lugyeeshey Markab dhawaan...Read More
HS:-M/weynaha iyo xisbigii oo ku lugyeeshey Markab dhawaan...Read More
HS:- Dowladaha Jabouti iyo Sacoudiga ayaa ku guuleystay mudo dheer kedib in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah Maraakiibtii shixnadaha iyo hubka u qaadi jiray jabhada Xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen.
Markabka la qabtay ayaa waxaa documentiga lagu waday ku qornaa xildhibaan Faarax Sheikh C/qaadir oo isagu Somali badankeed qireen inuu yahay madaxweynaha dadban ee Somaliya.
Hadaba markabkaan oo ay hada gacanta ku hayaan wadamada Sacoudiga iyo Jabouti ayaa baaritaankiisa waxaa lagu wadaa iney ku soo biiraan sirdoonka dowladaha daneeya arimaha Somaliya amaba siyaasad kala dhaxeyso dowlada Iiraan.
Hadaba arintani ayaa waxey fashil xoogan ku tahay iyadoo weliba dalka Somaliya laga filayey iney doorasho ka dhacdo , hadane arintaan waxey aad u dhaawaci doontaa xiriirka madaxweyne Xasan Sheikh iyo saaxiibadiis kala dhaxeeyey dowladaha Khaliiijka,waxeyna u badan tahay inuu waayo deganaansho uu ku heystay xildhibaan Faarax cabdulqaadir dalka Qatar oo aheyd midii soo saartay xisbiga madaxweynaha Somaliya ee dhiiga cusub.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay xasanadooda ku waayaan masuuliyiin badan oo durbaba la sheegayo iney ku lug leeyahiin. maraakiibtaan ayaa inta badan la rtumeysan yahay iney dowlada Iiraan ka keenaan hubka iyo waxii hadba sahay ah ee loo wado jabhada ay maalgeliso dowlada Iiraan siiba Xuutiyiinta Yemen ka dagaalamo.
Sidoo kale arintaan ayey waxey lama filaan ku noqon doontaa dowladaha Jabouti iy Sacuudiga Carabiya oo siyaabo kala duwan dadka Somaliyeed u caawiya, una heyustay imn ay dalka Somaliya ka jirot dowlad la aamini karo hadalkeeda.
Hadaba warbixintaan oo xasaasi ah siweyna caawa looga dareemayo madaxweynaha iyo saaxiibadiisa ugu dhaw xisbigiisa dhawaan naga filo hadba intii macquul ah ee aanu ka soo ogaano markabkaan u rarnaa Xildhibaan Faarax Cabdullqaadir iyo tiro wasiiro ah oo ka mid ah xukumada RW Cumar Cabdirashiid kuwaasi oo ah kuwa taageera siyaasada madaxweynaha Somaliya.
· admin on June 11 2016 18:45:40 · 0 Comments · 1344 Reads ·
14,361,963 unique visits